सरकारको अलौकिक योजना: आकासमै एयरपोर्ट !
नेपालमा भई रहने हवाई दुर्घटना रोक्न सरकारले अलौकिक कार्ययोजना ल्याउने भएको छ । योजना अनुसार, आकासमै एयरपोर्ट निर्माण, स्काई क्रेनको उडानसँगै फ्लाइङ् हस्पिटलको सञ्चालन हुनेछ । यो योजना सफल भएमा वर्तमान
केरा काटेर हेर्दा तेह्रजना बेहोस
केरा काटेर हेर्दा तेह्र जना बेहोस भएकाछन् । बेहोस हुनेहरुमा अधिकांस किशोर/किशोरी छन् । केही बृद्ध/बृद्धामा पनि प्रेसरको समस्या देखिएको बताईन्छ । देशभर देखिएको यो अ९ठो रोग पहिचानका लागि सरुवा
सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ पक्राउ !
कलाकार सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ पक्राउ परेकाछन् । समाचार अनुसार, सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा उनलाई पक्रिईएको हो । उनि ‘धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसन’को नाम त्यहाँ भुकम्प पीडितकालागि बस्ती निर्माण गरिररहेका थिए । सिस्नुपानी नेपालको
कोशी ब्यारेज ध्वस्त पार्न खोज्नेले गोली खायो
कोशी ब्यारेज ध्वस्त पार्ने योजनामा रहेको एक अज्ञात् आतंकबादीले गोली खाएको छ । गोली खानुअघि उसले सप्तरीका प्रमुख जिल्ल अधिकारीलाई नो नम्बरबाट फोन गर्दै आफ्नो निकृस्ट सोचका लागि क्षमा दिन
बालुवाटार छोड्न सातदिने अल्टिमेटम
सुशासन र सदाचारकालागी हास्यब्यङ्ग्यको हतियार उठाएको सिस्नुपानी नेपालले काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई ‘बालुवाटार छोड्न सातदिने अल्टिमेटम’ दिएको छ । प्रधानमन्त्री हुनासाथ सिंहदरबार र बालुवाटार धाउने परम्परालाई तोड्दै सिस्नुपानीको
डाेनाल्ड ट्रम्प ‘ट्रुथ सोसल’ खोल्ने, केपी ओली ‘दुनियाँ नहँसाउन’ सुझाव दिने 🤣
सिकेका कार्यकर्ताले सिक्न त सिके तर खै के सिके सिके…
बाढी पीडितलाई राहतको पहल गर्नकालागि पहल हुँदै, दिने टुङ्गो छैन…
अक्सिजनमा मन्त्रीको फोटो, खोप कार्डमा मोदीको फोटो ! बुद्धि मोटो…
बहुमत, अल्पमत दुबैको हेरियो, अब शून्यमतकाे सरकार !